‘म ५६ बर्षको भए श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु’ तर उनले शारीरिक क्रिया गर्नै दिन्नन् : म के गरौ ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/‘म ५६ बर्षको भए श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु’ तर उनले शारीरिक क्रिया गर्नै दिन्नन् : म के गरौ ?
‘म ५६ बर्षको भए श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु’ तर उनले शारीरिक क्रिया गर्नै दिन्नन् : म के गरौ ?
mature couple relation controversy india
काठमाडौ । पति–पत्नीबीच भावनात्मक संलग्नतासँगै शारीरिक घनिष्टता पनि आवश्यक हुन्छ।पार्टनरलाई जतिसुकै बुझे पनि खराब यौन जीवनका कारण सम्बन्धमा दरार आउँछ ।एक पुरुषले सम्बन्ध पोर्टलमा आफ्नो वैवाहिक जीवनसँग सम्बन्धित यस्तै समस्या सेयर गरेर विशेषज्ञसँग सल्लाह मागेका छन् ।
ती व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘म ५६ वर्षको हुँ र मेरो विवाह भएको लगभग २५ वर्ष भइसकेको छ । मेरी श्रीमती र मैले शारीरिक सम्बन्धमा कमी गरेको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो कुराले मलाई धेरै सताउँछ।हाम्रो वैवाहिक जीवनबाट उनले यो कुरालाई पूरै हटाइदिए जस्तो लाग्छ। हामी प्रायः यसको बारेमा कुरा गर्छौं, तर उनी भन्छिन् कि उनी अब आत्मीयतामा रुचि राख्दैनन् र म उनको निर्णय स्वीकार गर्न चाहन्छु ।
ती व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘तर मेरी श्रीमतीको यो कुराले म निकै दुखी छु । म अहिले आफूलाई त्यति बूढो ठान्दिनँ र मलाई लाग्छ कि आत्मीयता बिना कुनै पनि बैबाहिक सम्बन्ध मजबुद हुन सक्दैन। मैले बुझिन म यसलाई कसरी ठीक गर्ने ?उनी यसबारे काउन्सिलरसँग कुरा गर्न तयार छिन् तर यसबाट हामी दुवै निकै दुखी छौ ।
उनले लेखेका छन् मेरो दुःख पछाडीको यो भावनालाई उनले स्विकार गरिनन् भने मैले मेरो जीवनभर शारीरिक सम्बन्ध बिना नै बिताउनु पर्छ, जुन मेरो अनुसार अन्याय हो । म मेरी श्रीमतीलाई माया गर्छु र यो अवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छु। कृपया मलाई भन्नुहोस् मैले के गर्नुपर्छ ?
पुरुषको यो पोष्टको जवाफ दिँदै विज्ञले भने, ‘यदि तपाईको श्रीमतीले काउन्सिलरकहाँ जान राजी भएकी छिन् भने यो धेरै राम्रो कुरा हो ।
कहिलेकाहीँ तेस्रो व्यक्तिले दुवै पक्षको कुरालाई राम्रो तरिकाले व्याख्या गर्न सक्षम हुन्छ।शारीरिक घनिष्टताको आवश्यकताको सन्दर्भमा तपाईं आफ्नो ठाउँमा बिल्कुल सही हुनुहुन्छ र यदि तपाईं यस कुराबाट अनावश्यक रूपमा टाढा रहनुभयो भने यसले तपाईंको वैवाहिक जीवनलाई पनि असर गर्नेछ।
एक सल्लाहकार संग भेट्दा, ईमानदारीपूर्वक उसलाई तपाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने बारे सबै कुरा बताउनुहोस्। श्रीमतीको यौन चाहना बढाउन उनीहरुको सल्लाह पनि लिन सकिन्छ ।यसबाहेक श्रीमतीको भावनालाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंहरूले यति लामो समय सँगै बिताउनुभएको छ ताकि तपाईं एकअर्कालाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो समस्याको समाधान आपसमा खुलेर कुरा गरेर खोजिनेछ ।
आधा घण्टाका लागि ब्वाइफ्रेण्डसँग घरबाट निस्केकी २१ वर्षीय बिना सापकोटा चितवनबाट बेपत्ता
गुल्मीको मुसिकोटमा जिप दु,र्घटना, २ जना घाईते !
“संक्रमण भएकी युवती,को प्राइभेट पार्ट हेर्न खोजेपछि….